မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: ရန်ကုန်မြိှု့ဗဟန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ “၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
ရန်ကုန်မြိှု့ဗဟန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ နာမည်ကြီးအထူးကုဆေးရုံကြီးတစ်ခုရဲ့ တာဝန်ရှိသူများနဲ့
ဒီဆေးရုံမှာလူနာတွေကိုရောဂါကုသပေးနေတဲ့ သမားတော်ကြီးများကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလိုက်တွေ့ပြီမေးရမှာ
အဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကျွန်မ သိချင်လွန်းတဲ့ အချက်တွေကိုဒီကနေဘဲမေးလိုက်ရတာပါ။
ဒီဆေးရုံရဲ့တာဝန်ရှိသူများနဲ့ အထူးကုသမားတော်ကြီးများ မိမိတို့ အသက်သခင်ကျေးဇူးရှင်ဆိုပြီး ယုံကြည်အားကိုစွာနဲ့ ကိုယ့်အသက်ကိုနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကိုအပ်ထားတဲ့လူနာနဲ့ လူနာရှင်တွေအပေါ်
ကျွန်မဘာလို့ ဒီမေးခွန်းကိုမေးရသလဲဆိုရင် ကျွန်မအမျိုးသားဟာ သူယုံကြည်အားကိုးစွာနဲ့ သူ့အသက်ကို အပ်နှံထားတဲ့ အဆစ်အမြစ်သမားတော်၊ ရင်ခေါင်းပိုင်းဆိုင်ရာ သူ့အဆုတ်ကို ကုသပေးနေတဲ့ အမျိုးသမီးသမားတော် ၊ သွေးရောဂါကုသမားတော်ကြီးနဲ့ နောက်ဆုံးအပ်လိုက်ရတဲ့ နှလုံးအထူးကု သမားတော်ကြီးလေးယောက်စလုံးရဲ့ ဥပက္ခာပြု လစ်လျူရှုခြင်းကိုခံရပြီး (၂၉.၁၁.၂၀၁၀) တနလာင်္နေ့ နေ(၄:၃၀) မှာ အဲ့ဒီဆေးရုံရဲ့ (ICU) ဆိုတဲ့အထူးကြပ်မတ်ဆောင်မှာဘဲ အသက်ပျောက်ခဲ့ရပါတယ် ။
ကျွန်မအမျိုးသားဆုံးတာ ဒီနေ့ဆိုရင် တစ်လကျော် ရှိသွားပေမဲ့ သူဆုံးခါနီး နိုဝင်ဘာလ (၂၈) ရက်နဲ့ ၂၉)ရက်နေ့တွေမှာ ဒီဆေးရုံပေါ်မှာ ကျွန်မတို့ခါးသီးစွာတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရတဲ့ အခြေအနေနဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကိုဘယ်လိုမှဖြေဖြောက်မရနိုင်သေးဘူးဆိုတာ သက်ဆိုင်သူအားလုံးကိုသိစေချင်ပါတယ်။
ကျွန်မရူးမတတ် သိချင်နေတဲ့အချက်က ကျွန်မအမျိုးသားဟာ ဘာကြောင့်ဒီလောက်အချိန်တိုတို အတွင်းမှာ
သူ့ကို ကုသပေးနေကြတဲ့ သမားတော်ကြီးတွေထဲက
ကုလို့မရနိုင်တော့ဘူးဆိုတာကို ပြောပေးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့
အခုကျွန်မအမျိုးသားဆုံးခါနီးမှာ ဆေးရုံပြန်တတ်ရတာ ဒုတိယအကြိမ်ပါ ၊
ပထမအကြိမ်က အောက်တိုဘာလ (၂၃) ရက်ကနေ နိုဝင်ဘာလ
(၁၁) ရက်နေ့ထ ရက်နှစ်ဆယ်တိတိကြာခဲ့ပါတယ် ၊ ဒီအတွင်းမှာ
သွေးအထူးကုသမားတော်ကြီးတွေပါ ၊ ကျွန်မ
အဆစ်အမြစ်သမားတော်နဲ့ ကုသနေတာတစ်နှစ်လောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ အခုဆေးရုံတတ်ရမဲ့
အခြေအနေကြောင့် သူနဲ့သွားပြတဲ့အချိန်ကစပြီး ကျွန်မတို့
လူနာရှင်တွေဘက်ကကိုယ်တင်ချင်တဲ့ ဆေးရုံကအစ ကိုယ်ကုချင်တဲ့သမားတော်အထိ
မတင်ချင်လို့တခြားဆေးရုံမှာ တင်ဖို့ပြောပေမဲ့ အဆစ်အမြစ်သမားတော်က
သူတို့ဆေးရုံမှာရှိတဲ့ သူတို့အချင်းချင်း ချိတ်ပေးတဲ့သမားတော်တွေနဲ့သာ
ကုခဲ့ရတာပါ ၊ ကျွန်မတို့မှာ ကိုယ့်လူနာဘာဖြစ်မှန်း မသိရဘဲ
အဆုတ်သမားတောနဲ့ သွေးသမားတော်တို့ရောက်လာမှ အဆုတ်နဲ့သွေးထဲမှာ
ပြဿနာရှိမှန်းသိရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူနာနဲ့ ကျွန်မတို့
လူနာရှင်တွေဆိုပြီ အရမ်းကိုယုံကြည်အားကိုးခဲ့ပါတယ် ၊ ဒီလိုနဲ့ဆေးရုံမှာ
ရက်နှစ်ဆယ်ကြာပြီ နိုဝင်ဘာလ (၁၁) ရက်နေ့မှာ
ဆရာဝန်သုံးယောက်စလုံးက လူနာသက်အန္တာရယ် မရှိတော့လို့ ဆေးရုံက
ဆင်းခွင့်ပြုလိုက်တာကို ယုံကြည်မိပြီးလူနာကို အိမ်ပြန်ခေါ်ခဲ့မိတာ
ကျွန်မတို့ရဲ့ အမှားလားလို့ဖြေမရနိုင်အောင် နောင်တရနေခဲ့ပါတယ် ။
ဒီအဖြစ်မျိုးကြုံရမှာစိုးလို့ လူနာကိုဆေးရုံက မဆင်းစေချင်သေးလို့
လူနာရဲ့ အဆုတ်ထဲမှာ တီဘီဖြစ်နေလို့တီဘီဆေးကိုခြောက်လသောက်ရမယ်ဆိုပြီ
တောင်းတောင်းပန်ပန်ပြောခဲ့တဲ့ လူနာရှင်ကျွန်မရဲ့ စကားကို
လုံးဝလစ်လျူရှုပြီး လူနာကိုဆေးရုံက ဆင်းစေခဲ့ပါတယ်။
ရှေ့ရက်က ပြောခဲ့တဲ့ သမားတော်သုံးယောက်စလုံးရဲ့
ဒီထက်ပိုပြီးစိတ်ချရတဲ့ အခြေအနေထိနေခဲ့ရမယ်ဆိုရင် အခုလောက်ထိမြန်မြန်
ကျွန်မတို့ကို စွန့်ခွာသွားရမှာ မဟုတ်ဘူးလို့တွေးမိပြီး
ကျွန်မတမြေ့မြေ့နဲ့ခံစားနေရတာဟာ ဘယ်သူကြောင့်ပါလဲ ?
ဆေးရုံကဆင်းပြီဆယ့်ခုနှစ်ရက်ကြာတဲ့အထိ ကြားထဲမှာ အဆုတ်ရဲ့ အခြေအနေကို
တခါမှပြန်မစစ်ဆေးတာဟာ လူနာရဲ့ရောဂါအခြေအနေက သိပ်ကိုစိတ်ချရတဲ့
ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ ကုသချက်ဟာအရမ်းမှန်ကန်နေလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို
ယုံကြည်မှုလွန်ကဲထားတာလား ? လူနာဟာတီဘီရောဂါအမှန်တကယ်
ပစ်ထားခဲ့တာဟာ ဘာကြောင့်ပါလဲ? ဘယ်သူမှာတာဝန် အရှိဆုံးလဲဆိုတာ
သူမကိုယ်တိုင်လဲသိနေမှာပါ ။ကျွန်မရဲ့ မေးခွန်းကိုဖြေဖို့သက်ဆိုင်ရာ
သမားတော်မှာ အဖြေတစ်ခုခုတော့ရှိနေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် ။
ဆေးရုံကဆင်းပြီ တစ်ပတ်အကြာ (၁၈.၁၁.၂၀၁၀)နေ့မှာ
အတွက်သွားပြန်ပြခဲ့ပါတယ် ၊အဲ့ဒီအချိန်ထိ သမားတော် နှစ်ယောက်စလုံးက
လူနာကလဲအိမ်မှာစိုးရိမ်းရလောက်အောင် ထူးခြားတဲ့ လက္ခဏာမပြတော့
ကျွန်မတို့လဲ သိပ်မစိုးရိမ်ခဲ့ပါဘူး ၊ ဒီလိုဆရာဝန်တွေကိုဘဲ
ကျွန်မအခုနောက်ဆုံးပြောပြချင်တာကတော့ လူနာဆေးရုံကဆင်းပြီး (၁၇)
နိုဝင်ဘာလ (၂၈) ရက် နေ့လည် (၁:၃၀) ကနေ လူနာဆုံးတဲ့ နိုဝင်ဘာ (၂၉) ရက်ညနေ့
အဖြစ်အပျက်တွေပါဘဲ ၊ (၂၈) ရက် နေ့လည် (၁:၃၀) ဆေးရုံရောက်မှ လူနာရဲ့
အဆုတ်ကို ဓာတ်မှန်ပြန်ရိုက်ပြီး အဆုတ်သမားတော်ကို
ပြတော့မှ အဆုတ်ရဲ့အခြေအနေကအရမ်းစိုးရိမ်ရလို့ ဆေးရုံပြန်တင်ခိုင်ပါတယ်။
လာကြည့်ခိုင်းခဲ့ပါတယ် ၊ အဲ့ဒီအချိန်ဟာ ကျွန်မတို့
အရေးပေါ်ခန်းမှာဘဲရှိနေသေးတာပါ ၊ ညနေ (၅:၀၀) လောက်မှ
လူနာကို အခန်းထဲ ရွှေ့ပေးခဲ့ပါတယ် ၊ဒီအခန်းမှာ လူနာဟာ (၁၈:၀၀)
နာရီလောက်နေခဲ့ရပေမဲ့ နှလုံးသမားတော် အပါအ၀င်ကျွန်မတို့ လူနာကို
ကုပေးဖို့ယုံကြည် အားကိုးစွာ အပ်နှံထားတဲ့ သမားတော်လေးယောက်စလုံး
အရိပ်တောင်မတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ On Call ခေါ်ပေးခိုင်းလဲ တစ်ယောက်မှ
ရောက်မလာကြပါဘူး၊ လူနာဟာ တညလုံးမျက်လုံးကြောင်တောင်နဲ့ မလှုပ်မယှက်
ငြိမ်နေတာကို ဘာဖြစ်လို့ဒီလို ဖြစ်နေတာလဲလို့ လာကြည့်တဲ့
သူတို့ပြောတာကိုဘဲယုံကြည်နေခဲ့မိပါတယ် ၊ နောက်ဒီဆေးရုံကတော်တယ်လို့
သတ်မှတ်ထားပြီးခေါ်ပေးတဲ့ အသက်ခြောက်ဆယ်ရှိ မှော်ဘီမှာ
နေတဲ့အမျိုးသားသူနာပြုက မနက် (၅:၀၀) မှာထပြီး လူနာကို အတင်းထထိုင်ခိုင်း
ကျွန်မတို့လူနာရှင်က တားတာလဲမရပါဘူး ၊ ဒီအချိန်မှာ
ဒီအခြေအနေကို တစ်ညလုံးတွေ့မြင်နေရက်နဲ့ သူနာပြုတစ်ယောက်လုပ်နေပြီး
ပြင်းထန်စွာ ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ လူနာတစ်ယောက်ကို
ဒီလိုပုံမျိုးလုပ်သင့်ပါရဲ့လား ? ဒီဆေးရုံရဲ့
တာဝန်ရှိသူတွေဆုံးဖြတ်ပေးကြပါ ၊ လူနာဟာ ဆေးရုံရောက်ပြီနောက်နေ့ နိုဝင်ဘာလ
မနက် (၁၁:၀၀) နာရီ အရောက်မှာ လူနာရဲ့အရမ်းစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေကြောင့်
ဆိုတာသိလိုက်ရတဲ့အတွက် ဒီဆေးရုံရဲ့ (ICU)လို့ခေါ်တဲ့ အထူးကြပ်မတ်ဆောင်ကို
ပို့ပြီအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ တာဝန်ကျဆရာဝန်ရဲ့ လက်ထဲကိုဘဲ
ကိုယ့်လူနာကိုအပ်လိုက်ရပါတယ် ၊ (ICU) ရောက်မှ အဲဒီက ဆရာဝန်တွေပြောလို့
သတိလစ်နေမှန်းသိလိုက်ရတာပါ ၊ လူနာဟာတစ်ညလုံးသတိလစ်လိုက် ပြန်လည်လာလိုက်
ဖြစ်နေတာပါ ၊ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကို
ခြောက်နှစ်လုံးလုံးဆေးပညာတွေသင်ယူခဲ့တဲ့ဆရာဝန်တွေ တကယ်ဘဲမသိတာလား ?
ကျွန်မတို့ လူနာရှင်ကိုဘာဖြစ်လို့ အမှန်တိုင်းမပြောပေးနိုင်တာလဲ?
(ICU) ရောက်တော့ လူနာကိုတပ်ပေးထားတဲ့စက်တစ်လုံးကမမှန်ဘူးတဲ့ ပျက်နေတာတဲ့၊
ဒါသူတို့ဆရာဝန်အချင်းချင်းပြောလို့ ကျွန်မတို့ ကြားပြီ
တော်တော်ကိုတုန်လှုပ်သွားမိပါတယ် ။(ICU)ဆိုတာ လူနာတွေအရမ်းစိုးရိမ်ရတဲ့
အခြေအနေမျိုးမှာ ပိုက်ဆံအများကြီးပေးမှထားရတဲ့နေရာပါ ။
ဒီလိုနေရာမှာ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးဖြစ်သင့်ပါရဲ့လား ? လူနာဟာ (ICU) ရောက်ပြီး
အဲဒီ အချိန်ထိဘယ်သမားတော်တစ်ယောက်မှ ရောက်မလာခဲ့ပါဘူး ၊
ဘာဖြစ်လို့မလာကြတာလဲ ? လူနာဟာကလို့မရနိုင်တော့ဘူးဆိုတာကို
ကြိုသိနေခဲ့ရင်တောင် လူနာရှင်တွေကို တစ်ချက်လောက်တော့ မျက်နှာပြပြီး
နှစ်သိမ့်ပေးသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ် ။ ရိုင်းရိုင်းပြောရရင်
ကျွန်မတို့က သမားတော်တွေကိုအခမဲ့ ကုခိုင်တာတောင်မဟုတ်ပါဘူး ၊ သက်ဆိုင်ရာ
လူနာဟာ ကုမရနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေရင်တောင် ကျွန်မတို့ လူနာရှင်ကို
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြသင့်တာပေါ့ ။ အခု သမားတော်တွေရဲ့
လုပ်ရပ်ဟာ ကိုယ်ကုသပေးနေတဲ့ လူနာတစ်ယောက်ကို ပစ်ထားခဲ့တာ
သိပ်ရက်စက်ရာကျနေတယ်လို့များ မတွေးမိဘူးလား? ကျွန်မအခု
ဒီကနေမေးနေတာကို သက်ဆိုင်ရာ ဆေးရုံက တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ
သမားတော်တွေသိကြမှာပါ ၊ ကျွန်မဒီကနေတင်ပြတာတွေက
ထိခိုက်နစ်နာစေလိုတဲ့ဆန္ဒမရှိပါဘူး ၊ လူနာရှင်တွေရဲ့ခံစားချက်ကို
ကျွန်မနောက်ဆုံးပြောချင်တာက သမားတော်ကြီးများအားလုံး မိမိတို့ကို
အားကိုးယုံကြည်ပြီး ကိုယ့်အသက်ကို အပ်ထားတဲ့လူနာတွေကို
အချိန်နည်းနည်းပေးပြီ ဂရုစိုက်အလေးထားပေးမယ်ဆိုရင် လူနာတွေကိုယ်စား
ကျွန်မသမားတော်ကြီးအားလုံးကို အမြဲကျေးဇူးတင်နေမိမှာပါ ။
ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အထူးကုဆေးရုံမှ တာဝန်ရှိသူများနဲ့
သမားတော်များလုံးလူနာ နဲ့ လူနာရှင်တွေအပေါ် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်
ထားပေးနိုင်ကြပါစေ ။Rest of your post